Ciidamada Dowladda oo howlgal ku qabqabtay dad farabadan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Ciidamada Dowladda oo howlgal ku qabqabtay dad farabadan
Ciidamada Dowladda oo howlgal ku qabqabtay dad farabadan
Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo ay wehlinayeen Ciidamada Maamulka degmada Balcad ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen tuulooyin hoostaga degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Howlgalka ayaa waxaa hoggaaminayay Taliyaha Guutada 3-aad ee Gaashaanle Sare AbshirMaxamuud Maxamed (Shataqeey), waxaana ay sigaar ah uga fuliyeen degaannada Jaamacca, Mareereey, Mukaydheere oo ku yaalla duleedka Bari ee degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Intii howl galkaasi socday ayeey ciidmada waxey gacanta kusoo dhigeen dhowr qofood oo looga shakisanyahay in ay ka mid yihiin Kooxda Alshabaab oo maalmahaan ku dhuumaaleysanayey deegaanadaas.
Taliyaha Guutada 3-aad ee Gaashaanle Sare AbshirMaxamuud Maxamed (Shataqeey) ayaa sheegay in howlgalka ay kusoo qabteen dhowr qofood oo ay uga shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Ciidamada Dowladda ay sii wadi doonaan howlgallada ilaa iyo inta ay Al-Shabaab ka saarayaan degaannada hoostaga degmada Balcad ee Gobolkaasi Shabeellaha Dhexe.
Deegaannada hoostaga degmada Balcad ayaa waxaa weli ku sugan Xubno ka tirsan Al-Shabaab,kuwaas oo mararka qaar weeraro toos ah iyo kuwo hoobiyeyaal ah kusoo qaada saldhigyada Ciidamada Dowladda & kuwa AMISOM ee degmada Balcad.
Previous articleKulan u dhaxeeyay Maamulada Hir-Shabeelle & DDS oo fashil ku dhamaaday
Next articleDHAGEYSO: Warka Habeen 29-06-2020